महान् हामी - परिहास - नेपाल
कुनै विद्वान्ले नेपालीलाई नै संकेत गरेर भनेको हुनुपर्छ, ‘ग्रेट पिपल फरगिभ, इन्टेलिजेन्ट पिपल इग्नोर’ । अर्थात्, महान् मान्छे क्षमा गर्छन्, बुद्धिमान्हरु बेवास्ता गर्छन् । यी दुई स्वभावले मान्छेलाई समस्यामा पर्न, त्यसको प्रभाव कम गर्न वा समस्यामै नपर्न खूब मद्दत गर्छ । नेपालीलाई ‘इग्नोर’ गर्ने बानीमा कसले जित्ने ?
जस्तो: ट्राफिक नियमको बेवास्ता नगरे समयमै गन्तव्य नपुगिने टन्टाबाट जोगिन्छौँ । यहाँ नथुक्नु होला, धूमपान नगर्नु होला वा यस्तै निषेध लेखिएको ठाउँमा झन् त्यही त्यही काम गरुँ गरुँ लाग्छ हामीलाई । अझ, सहनशीलता र क्षमादानमा नेपाली अब्बलै भए । नत्र दशकभन्दा लामो लोडसेडिङको अँध्यारोमा कसरी बाँच्न सक्थ्यौँ र ? वर्षायामको हिलो र हिउँदको धूलो कसरी पचाउनू ?
बिफरले छ्याके बनाएको छालाजस्तो खाल्डाखुल्डी सडक पनि सहेकै छौँ । ढाड भाँच्चिने महँगी, घुस्याहा कर्मचारी, औँठाछाप नेता, तस्कर मन्त्री, ६ सय १ सुुतुवा पनि सहेकै छौँ । सीमामा छिमेकीले रातारात सीमास्तम्भ गायब पार्छन् र पनि हामीले क्षमा गर्दै आएकै हौँ । त्यसैले नेपाली साँच्चिकै ‘ग्रेट’ छन्, हुन् । यसमा कुनै वाद–प्रतिवाद आवश्यक छैन ।